8 barnaamijyada ugufiican ee lagu mariyo PC 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
8 ugu fiican software slideshow on PC
Qofkasta oo ubaahan sameeye sameeye muqaal ah wuxuu lahaan karaa dhowr ikhtiyaar, ama inuu ku soo dejisto kombuyuutarka ama uu internetka ugu adeegsado biraawsarka. Waxaa jira qalab kuu oggolaanaya inaad ku abuurto bandhigyo qoraal, muusig, sawirro iyo fiidyowyo. In badan oo iyaga ka mid ah, looma baahna xitaa in khibrad loo yeesho codsiyada noocan ah si loo qurxiyo. Baadhid!
Prezi waxay noqon kartaa xulashada ugu fiican ee kuwa doonaya inay abuuraan bandhigyo firfircoon. Bogaggu waxay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo caqli-gal ah oo weynaadaan si ay indhahaaga ugu jiheeyaan waxa muhiimka ah. Waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo loogu talagalay sheybaarrada diyaarka ah oo si buuxda wax looga beddeli karo, kuwaas oo aad ku dhejin karto sawirada, fiidiyowyada YouTube, iyo sawirrada.
Qorshaha bilaashka ah (Aasaasiga ah) wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qaabeyso ilaa 5 mashruuc, oo u muuqda kuwa kale ee adeega. Waxaad ku martiqaadi kartaa dadka kale inay wax ka beddelaan shaqadaada khadka tooska ah.
Prezi (bilaash, oo leh ikhtiyaarrada qorshe bixinta): Webka
PowerPoint waa mid ka mid ah hormoodka markay tahay slideshows. Barnaamijku wuxuu bixiyaa daraasiin arrimo ah iyo noocyo kaladuwan oo ku-meelgaar ah iyo saamaynta animation. Waa suurtagal in la geliyo fiidiyowyo, sawirro, muusig, jaantusyo, miisas, iyo waxyaabo kale.
Isticmaaluhu wuxuu kaloo ku xisaabtami karaa waxqabadka duubista shaashadda soo bandhigidda, oo ay ku jiraan sheekooyin. Iyo waliba qaadashada qoraalo ay u muuqdaan oo kaliya kuwa soo bandhigaya. Software-ka wuxuu u muuqdaa inuu yahay mid dareen leh kuwa adeegsada barnaamijyada kale ee ku jira xafiiska xafiiska.
PowerPoint (lacag bixin): Windows | macOS
PowerPoint khadka tooska ah (bilaash, oo leh ikhtiyaar qorshe lacag leh): Web
Zoho Show waa codsi aad u la mid ah PowerPoint, iyadoo laga faa'iideysanayo inuu xor ahaado. Adeeggu wuxuu sidoo kale la jaan qaadayaa barnaamijka Microsoft, isagoo awood u leh inuu furo oo keydiyo waxyaabaha ku jira pptx. Khadka tooska ah, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si wadajir ah wax uga beddesho illaa 5 qofood adigoon bixin wax lacag ah.
Abku wuxuu bixiyaa daraasiin tusaalooyin slide ah iyo mawduucyo, kuwaas oo si fudud loogu qasi karo. Waa suurtagal in la geliyo sawirro, GIF-yo iyo fiidiyowyo (laga soo qaato PC ama YouTube) oo lagu daro iskuxirka ka imanaya Twitter iyo bogagga kale, sida SoundCloud. Waxa kale oo jira qalab loogu talagalay saamaynta kala-guurka iyo tafatirka sawirka.
Zoho Show (bilaash, ikhtiyaar u ah qorshooyinka lacag bixinta): Webka
4. Bandhigyada Google
Google Slides (ama Google Slides) waa qayb ka mid ah xirmada wadista. Iyada oo fududahay in la isticmaalo isdhexgalka, waxay ku siisaa xulashooyinka mawduuca dhinaca midig ee shaashadda. Hawlaha tafatirka Template-ka waxaa lagu muujiyey bar-tilmaameedka.
Mashruuca waxaa fulin kara dhowr qof isla waqti isku mid ah, kaliya abuuraha ayaa ogeysiinaya xiriirka ama casuumaada. Codsiga ayaa kuu oggolaanaya inaad geliso sawir, dhawaq, miis, garaaf, jaantus, fiidiyowyada YouTube, iwm. Natiijada waxaa laga daawan karaa internetka ama lagu keydin karaa pptx, PDF, JPEG, iyo qaabab kale.
Soojeedinta Google (bilaash, ikhtiyaar u leh qorshooyinka lacag bixinta): Webka
5. Shir muhiim ah
Barnaamijka asalka ah ee soo bandhigida aaladaha Apple, Keynote wuxuu leeyahay dhowr shey oo loo diyaariyey kuwa aan dooneynin inay waqti lumiyaan. Weli waxaa jira daraasiin saameyn ku-meel-gaadh ah. Waad ku iftiimin kartaa qoraalka hooska iyo qaababka waxaadna sawiri kartaa jidka walxaha, sida qaababka iyo sawirrada.
Isticmaaluhu wuxuu gelin karaa sawirro, fiidiyowyo, muusig, iyo waxyaabo kale. Haddii isdhexgalka iCloud la kiciyo, waa suurtagal in wax laga beddelo dadka kale, xitaa haddii ay isticmaalayaan Windows. Codsiga wuxuu aqrin karaa mashaariicda pptx wuxuuna ku keydin karaa qaab software Microsoft ah.
Asaasiga ah (bilaash): macOS
6. Si weyn
Genially waa ikhtiyaar in lagu sameeyo isjiidooyin qurux badan iyagoon aqoon u lahayn codsiyada bandhigga. Websaydhku wuxuu bixiyaa dhowr sheybaar, oo leh qaabab kala duwan oo ballaaran. Waxaa jira ikhtiyaarro loogu talagalay bogagga oo leh liisas muuqaal ah, sawirro ama weedho, jadwal, iyo inbadan.
Marka isticmaal kuwa aad u baahan tahay kuwa kalena iska tuur. Waad tifaftiri kartaa mid kasta oo aad gelin kartaa sawirro, GIFs, fiidiyowyo iyo maqallo, iyo sidoo kale sawirro is-dhexgal ah. Waxa kaliya ayaa ah in nooca bilaashka ah ay heli karaan isticmaaleyaasha kale ee adeegga.
La taaban karo (bilaash, ikhtiyaar u leh qorshooyinka lacag bixinta): Webka
7. Kan sameeyey Ice cream Muqaal
Icecream Slideshow Maker waa ikhtiyaar kale oo loogu talagalay kuwa doorbida inay ku soo dejiyaan barnaamijka kombuyuutarka oo ay ku shaqeeyaan khadka tooska ah. Codsiga waxaa loogu talagalay in lagu abuuro bandhigyo sawir leh oo leh muusig.
Laakiin waa suurtagal in la geliyo qoraalka qoraalka oo loo adeegsado maqal kala duwanaansho kasta ama isla heesta mashruuca oo dhan. Nooca bilaashka ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku keydiso natiijada Webm oo kaliya waxayna bixisaa xadka 10 sawir halkii bandhigba.
Ice cream Muqaal Muqaal (bilaash kheyraad kooban): Windows
Adobe Spark waa tifaftire khadka tooska ah ku shaqeeya oo bixiya qalab soo bandhigid dareen leh. Marka lagu daro xulashooyinka mawduuca, waxaa sidoo kale jira nashqaddo riix riixid ah oo ku yaal dhinaca midig ee shaashadda. Waa suurtagal in la geliyo sawir, fiidiyow, qoraal, muusig iyo xitaa codkaaga duub.
Muddada sawir kasta si fudud ayaa loo beddeli karaa, dhinaca hoose ee midig. Haddii aad rabto inaad sameysid gacmo badan, waad wadaagi kartaa iskuxirka ama ku martiqaad qofka aad rabto. Waxyaabaha laga arki karo internetka ama laga soo dejisan karo qaab muuqaal ah (MP4). Nooca bilaashka ah waxaa ka mid ah sumadda Adobe Spark.
Adobe Spark (bilaash, laakiin wuxuu leeyahay qorshayaal lacag leh): Web
Talooyin ku saabsan samaynta slideshow wanaagsan
Tilmaamaha soo socdaa waxay ka imanayaan Aaron Weyenberg, UX Hogaamiyaha TED, mashruuc gaaban oo mawduucyo badan taabanaya. Waxyaabaha ku jira waxaa laga heli karaa gebi ahaanba TEDBlog lafteeda. Fiiri qaar ka mid ah.
1. Ka fikir dadka dhagaystayaasha ah
Ha u maleynin boodboodayaasha inay yihiin qalab sharaxaad ah oo aad ku salayso bandhiggaaga. Waa in loo sameeyaa dadweynaha, iyada oo la tixgelinayo gudbinta khibrad muuqaal ah oo wax ku kordhinaysa wixii la sheegay.
Ka fogow galitaanka qoraalka badan. Sida laga soo xigtay Weyenberg, tani waxay kala qaybineysaa dareenka dhagaystayaasha, oo aan garanayn inay akhriyaan waxa la qoray ama ay dhagaystaan ​​waxa la yidhi. Haddii aysan jirin wax beddel ah, u qaybi mawduuca mawduucyo oo marba mid tus.
2. Joogtee halbeeg muuqaal ah
Isku day inaad dayactirto midabada midabka, noocyada font, sawirada, iyo kala guurka inta lagu guda jiro soo bandhigida.
3. Ha badin waxyeellooyinkaaga
Sidoo kale ma adeegsanayso kala guur. Khabiirka, xulashooyinka aadka u xiisaha badan waxay siinayaan aragti ah in soojeedintoodu ay noqon doonto mid caajis badan oo kaliya saameynta buunbuuninta leh ay dhagaystayaasha ka saareyso niyad jabkooda.
Ku tilmaan adeegsiga kheyraadkan qaab dhexdhexaad ah oo la doorbidayo kaliya kuwa ka xeelad badan.
4. Ha u isticmaalin otoplay-ka fiidiyowyada
Qaar ka mid ah barnaamijyada bandhigga ayaa kuu oggolaanaya inaad ku ciyaarto fiidiyowyo isla marka uu boorku furmo. Weyenberg wuxuu sharxayaa in marar badan ay waqti dheer ku qaadato feylku inuu ku soo bilowdo ciyaarta iyo soo-jeediyuhu wuxuu dhajiyaa biinka hal mar oo dheeri ah si uu isugu dayo oo u bilaabo.
Natiijo: Iskuduwaha xiga wuxuu ku egyahay inuu soo muuqdo goor dhow. Si looga fogaado noocyadan xaddidaadda ah, ikhtiyaarka ugu fiican ma aha in la doorto is-abuuris.
Codsiyo bilaash ah si fiidiyowyo loogu sameeyo sawirro iyo muusig taleefankaaga gacanta
Sida loo sameeyo banner ku yaal PowerPoint adoon ogeyn sida wax loo saxo
Tifatirayaasha qoraalka iyo bilaashka ah ee ugufiican